Ny 2000 WT14 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2000 WK52 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 FJ82 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 KD57 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 LA7 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2001 QY58 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 QY221 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 QL245 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 RC99 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 SG96 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 SC211 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SP237 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SU265 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SY286 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 SP343 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2001 TF48 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 UF130 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UR143 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 UC187 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2001 VB62 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 VF89 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 WS46 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2001 WZ96 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2001 YR135 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2002 AC30 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2002 CT65 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 CV84 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 CQ165 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2002 DL7 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2002 JG21 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 QU23 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 QW27 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 RY96 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2002 TD30 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 TS238 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2002 TS333 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2002 TX375 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2002 VZ47 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2002 YM26 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2003 FX6 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2003 FB12 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2003 HP6 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2003 SK101 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2003 XR4 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 1999 ND26 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2003 YH125 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2004 BV101 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 1999 RN116 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2004 CH43 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 CO73 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...